Rhinos - यो एउटा अचम्मको र भयानक पशु हो। यी दिग्गज लामो मिथक र दन्त्यकथा को एक किसिम विकसित गरेको छ, र सबै भन्दा सिङ विभिन्न रहस्यमय क्षमता गर्न श्रेय। सेतो गैंडा दोस्रो सबै भूमि को सबै भन्दा ठूलो छ किनभने पशु यो ध्यान, अचम्मको छैन। दुर्भाग्यवश, आफ्नो असामान्य विशेषताहरु यस प्रजाति हाल धेरै सानो छ भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेका छन्।
आफ्नो मान्छे को सार मा वृद्धि चासो फसाउन थाले को कारण। तर वर्ष अधिक मानिसको जिज्ञासा पनि साथ गायब थिएन, र यो जनावर को शिकार अझै पनि चलिरहेको छ। गैंडा मासु खाद्य छ। आफ्नो नम्बर किन निरन्तर घट्दै छ भन्ने छ। पहिले, जनावर को विभिन्न उप थिए, तर आज त्यहाँ पाँच मात्र बाँकी छन्। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सेतो गैंडा छ, र यो लाल बुक मा सूचीबद्ध छ। आज, यो व्यवस्था गरेर गार्ड सहित एक विदेशी पशु छ। लगभग 10,000 व्यक्तिहरूको क्षण जनसंख्या मा। यो आंकडा सुरक्षा कार्यक्रम चुपचाप संचालित भनेर देखाउँछ।
पशु को नाम
अचम्मको कुरा, तर वास्तवमा यो जनावर छैन रंग मा सफेद, यो यसको नाम लिन्छ हुनत छ। वास्तवमा,, predominantly खैरो जनावर जस्तै को छाला रंग कालो गैंडा। तर धेरै सुरुमा त्यहाँ "एक" "सेतो" को अंग्रेजी एक बिट यस्तै आवाज रूपमा colonists यो शब्द सारियो र सट्टा पशु को नाम संग भ्रम थियो। "कालो" भनिन्छ गर्न तिनीहरूले सुरु गैंडा सानो।
जनावर को प्रकृति
यो धेरै ठूलो छ किनभने हामी, पहिलो पटक एक गैंडा डरा गर्न सकिन्छ लागि हेर्दै हुनुहुन्छ। औसत यसको शरीर लम्बाइ चार मिटर पुग्छ। को withers मा मापन गर्दा, यो दुई मीटर को एक उचाइ पुग्छ। अधिकतम वजन सेतो गैंडा पाँच टन बराबर। यो एक ferocious जनावर हो किनभने यी आयाम, धेरै प्रभावशाली र राम्रो कारण लागि हो। सबैभन्दा आक्रामक अक्सर झगडे व्यवस्था गर्ने पुरुषहरु छन्। यो जनावर को संघर्ष एक क्रूर टोन छ। कहिलेकाहीं हरुवा छैन युद्धमा अन्त जाँदै छ जो, unruly शत्रु को धक्का देखि मर्छ। सेतो गैंडा को वजन जस्ताको तस्तै बाँकी को मौका समाप्त किनभने, एक क्रोधित पशु को आँखा फसाउन र जनावर तातो हात अन्तर्गत गिर लागि यसको प्रभाव घातक हुन सक्छ Savannah खतरनाक अन्य बासिन्दाहरूलाई। साथै, यो जिस्क्याउ धेरै सजिलो छ।
सबै भन्दा साधारण सेतो गैंडा एक गाढा खैरो रंग छ। आफ्नो थूथन तल किनभने आफ्नो नाक मा उपस्थित छन् जो दुई सीङ, को विस्तार गरिएको छ। पिछला सिङ असामान्य लामो र छ मिटर सम्म बढ्न सक्छ। रेकर्ड गरिएको रेकर्ड 158 सेमी बराबर छ। दोस्रो प्रक्रिया सामान्यतया धेरै सानो छ, र अक्सर एकदम सजिलै देखिने हुन सक्छ। Zoologists पहिलो सिङ सजिलो रुचाउने लागि झाडी मा बाटो सफा गर्न डिजाइन गरिएको छ भन्ने विश्वास गर्छन्। सेतो गैंडा अधिकतम वजन पुरानो व्यक्तिहरूलाई, त्यसैले प्राय 2.5 टन को एक औसत वजन संग उल्लेख थियो जनावर। आधुनिक सूचकांक उच्चतम आंकडा र वयस्क लागि अन्य रेकर्ड भयो। किलोग्राम मा सेतो गैंडा अधिकतम वजन3850. गठन भएको थियो यो जनावर धेरै विशाल छ, र छाला पनि बाक्लो छ, र लगभग कुनै बाल छ। जनावर को घाँटी धेरै छोटो छ। हामी कम तीन-toed खुट्टा गैंडा। औंलाहरु hooves अन्त। सामान्यतया यी पशुहरू बिस्तारै लक्षविना हिड्नु। तर अधिकतम बावजुद। सेतो गैंडा वजन, यसलाई 45 मी / घन्टा गति सक्षम छ। निस्सन्देह, देखि उहाँले धेरै टाढा चलाउन सक्दैन।
सेतो Rhinoceros अक्सर सानो समूह बसोबास। यी कदम सामान्यतया धेरै महिलाहरुको र आफ्नो बच्चाहरु र सक्षम गर्न आफ्नो आमा को मद्दत बिना गरिएको छ जो किशोर समावेश गर्नुहोस्। कहिलेकाहीं यो समूह सिर्फ लक्षविना हिड्नु, छडी नगर्ने पुरानो पुरुषहरु, सामेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि दीर्घकालीन गैंडा प्रयासहरू copulate गर्न, यो बहिष्कार र कहिलेकाहीं मार्न सक्नुहुन्छ। पनि सेतो गैंडा अधिकतम वजन क्रोधित महिलाहरुको उहाँलाई सुरक्षित गर्न। गर्म दिन समयमा जनावर को छाया मा लुकाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। साँझ को आगमन संग बथानलाई खर्क जान्छ। मौसम मध्यम तापमान प्रसन्न जब समयमा, गैंडा शायद ceasing खुवाउन। तिनीहरूले एक घाँस खान्छन्। यी पशुहरू संयंत्र कण को भाग हो, किनभने तिनीहरूले यो महामारीले देखि एक कछुवा बचत जनावर लागि प्रतीक्षा थिए जहाँ पानी, जान आवश्यक छ। मेरो जीवन मा, गैंडा मुख्य रूप गन्ध को अर्थमा प्रयोग गर्दछ। अन्य सचेत भएको स्तनधारी लागि यति महत्त्वपूर्ण छैन। यो रोचक कुरा हावा blows गर्दा सही व्यक्ति यो जनावर 35 मीटर भेट्नुपर्छ गर्न सक्ने छ। आफ्नो ferocity तापनि मानिसको सेतो rhinos प्रकारको सबै को सबै भन्दा डर र बित्तिकै यसलाई भाग्न प्रयास, नजिकैको लगािन्छ रूपमा छ। यसबाहेक, यसको गति 30 किमी / घन्टा हुनेछ।
गैंडा प्रजनन अवधि व्यक्ति पर्याप्त विस्तार भएको छैन अध्ययन। सामान्यतया लीक जुलाई मा सुरु र तीन महिनामा समाप्त हुन्छ। महिला 18 महिनाको लागि आफ्नो सन्तानलाई फलाउँछ। Rhinos केवल एक बच्चा ल्याउन। अधिकतम वजन सेतो गैंडा बस जन्म भएको थियो जो, 25 किलो छ। जन्म दिन पछि पारित, र बच्चा आमा पछ्याउन हुन सक्छ। हुनत यो अझै पनि 12 महिना छ दूध खान्छन् जारी अर्को सात दिन पछि उहाँले आफ्नै तान्नु बाहिर निकाल्न गर्न, सुरु हुन्छ। जब खतरा महिला मा बच्चाहरु, तिनीहरूलाई रक्षा, को घन्टी वरिपरि तिनीहरूलाई बनाउने टाउको बाहिरी शिकारीहरु बन्द रोक्नु गर्न बनेर। युवा जनावर मात्र सात वर्ष पछि यौन परिपक्व हुन्छन्। जन्म पछि, गैंडा र केवल तीन वर्ष को सन्तान हेरविचार लिन्छ अर्को हकदार ल्याउन सक्छ।
सर्प कोबरा - रोचक तथ्य। राजा कोबरा सर्प धेरै खतरनाक र छिटो छ
झूटा russula: सुविधाहरू र विशेषताहरु
कोमी को गणतन्त्र को लाल बुक को पशु: सूची, वर्णन र विशेषताहरु
Svinuha च्याउ - खाद्य वा विषालु?
किन पहिलो गियर खराब छ? चालक सुझाव
छोराछोरीको लागि शैक्षिक कार्टून: आमाबाबुको लागि सूची
आधुनिक प्रविधिहरू: ढाँचाको साथ खिच्ने छत
सिमसार cudweed: औषधीय गुण, आवेदन, contraindications र व्यञ्जनहरु
आकर्षण (साराटोभ क्षेत्र): आफ्नो विवरण र फोटो
अभिनेता Billi Krudap: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। शीर्ष चलचित्र
ओवन मा Tilapia fillets: माछा लागि विश्वव्यापी व्यञ्जनहरु
किन प्यानकेकहरू हतार? हामी यो घटना को कारण अध्ययन
के सीधा कोट लगाउने के साथ? केटीहरूलाई सल्लाह